I-MVRK: Ukwethulwa Komcimbi Obonakalayo we-3D | Martech Zone
I-MVRK: Ukwethulwa Komcimbi Obonakalayo we-3D
UMsombuluko, May 18, 2020 UMsombuluko, May 18, 2020 Douglas Karr
Ngesonto eledlule ngamenyelwa uhambo lwami lokuqala lwe- ingqungquthela ebonakalayo eku-inthanethi isikhala. Uma ngikhuluma iqiniso, ngenkathi isikhathi sokukhiya kusasebenza futhi ngicabanga ukuthi kungaba ithuluzi elihle, bengikhathazekile ukuthi kungenzeka ukuthi nalo geeky futhi angeke ihehe amabhizinisi amakhulu. Bengicabanga ukuthi kungafana nokudlala umdlalo wevidiyo kunokuthi ube sendaweni yebhizinisi egxilile.
Kodwa-ke, ukuvakashelwa ngumsebenzisi ongimemile empeleni kungihlabe umxhwele futhi ngaba nethemba mayelana nalokhu:
Ukuzulazula - Ngikwazile ukuhamba esikhaleni, ngabona amavidiyo noma izethulo, futhi ngazibandakanya nabantu mathupha.
1: 1 Ingxoxo - Ngikwazile ukuqala nokuxhumana nabantu emakamelweni abonakalayo lapho izingxoxo nezethulo bezenzeka phakathi kwethu kungekho omunye umuntu.
Okuhlangenwe nakho Okucwilisiwe - Okuhlangenwe nakho konke bekungafani neze nomdlalo wevidiyo, bekungazikhandleki futhi kusebenziseka kalula. Ngangibona ngokuphelele umuntu owayengenalo ulwazi lobuchwepheshe ekujabulela.
Thumela i-Lockdown - Ngangibona ngokuphelele phansi komgwaqo lapho inkampani ingaba nomcimbi obukhoma nomcimbi obonakalayo ngasikhathi sinye nalobu buchwepheshe.
Umdlali oyedwa kule makethe yi-MVRK, abaletha i-Vx360 ukuyimaketha. Ipulatifomu idala izindawo ezakhiwe ngokwezifiso eziguqula iwebhu ibe njengokufana nempilo okuhlangenwe nakho okubonakalayo lokho futhi kunweba ukufinyelela nokuhlaziya okungakaze kwenzeke ngaphambili.
Isebenzisa i-Vx360, i-MVRK ithuthukisa izindawo zomkhiqizo ezenziwe ngokwezifiso ezenza isipiliyoni sedijithali kuphela sizwe njengendawo yangempela yomhlaba ngokusebenzisa ihluzo ezisezingeni eliphakeme nemidwebo enokuhlola okungama-360-degree nokuhamba kube umcimbi ofana nempilo. Izivakashi nabahambele indawo bazungeza imvelo ebonakalayo ngamadivayisi wedeskithophu noma amaselula, babhekene namakamelo ahlukene, ukuhlangana, nokuningi.
Ipulatifomu ye-MVRK ye-Vx360 icebile ngamathuba okuxhuma kwabantu abaningi nokuzibandakanya kwabasebenzisi ngokusebenzisa umtapo wayo wezici eziyinhloko ezingasetshenziswa ngokwezifiso eziqondene nezidingo nezinhlelo ezithile nge:
Okuqukethwe okushumekiwe okusebenzisana kwevidiyo-On-Demand (VOD)
Amandla okusakaza bukhoma
Ukuhlanganiswa kwezindlela ezimbili zokuxhumana
Ukulandelelwa kwe-analytics okunwetshiwe
I-WebXR nezinye izinhlelo zokusebenza ezingokoqobo ezihlanganisiwe
Amathuba okuthi imikhiqizo nezimboni ezahlukahlukene zingasisebenzisa kanjani lesi sipiliyoni sokuntywila akunamkhawulo. Kunwetshwa ngale kwezingqungquthela zezinye izinhlobo zomkhiqizo ne-IP, njenge:
Thatha ukuzijabulisa uye ezingeni elilandelayo - Imikhakha ezimbonini ezinjengezinsizakalo zokusakaza, ifilimu nokushicilela kungakhuphula indlela abantu ababona ngayo abalingiswa nemigqa yokuhlela ngokufaka abalandeli bajule emazweni abawathandayo futhi ibavumele ukuthi bavakashele kaningi ngendlela abangathanda ngayo, lapho bengathanda. Ukusebenza kwamasizini amasha noma okuqukethwe kunwetshiwe ukufinyelela ngaphandle kwama-pop-ups wendabuko okuvumelekile zonke fan ukuzibandakanya.
Nikeza ukwethulwa komkhiqizo ukufinyelela okungakaze kube khona - Ukungeza okucwilisiwe okuyingxenye yewebhu ekuqalisweni komkhiqizo omusha manje kusho okungaphezu kwewebhusayithi ehambisanayo. Ubuciko bokwenza kusebenze abazi mingcele ngezindawo ezenziwe nge-Vx360 futhi abasebenzisi bathola umuzwa ophakeme womkhiqizo wokuhambisana nomnikelo ophathekayo.
Shintsha imicimbi yabantu nezingqungquthela - Ngokulinganiselwa okusha kokuzibandakanya kwabantu ngaphakathi, ama-brand angadlulisa idokodo eliphoqayo, umbukiso noma okuhlangenwe nakho komcimbi emhlabeni wedijithali lapho abakhona bangahamba bezungeze indawo ebanzi yokuqukethwe okungenakulibaleka nokusebenzisana okuvela kubaxhasi abahlukahlukene nabalingani bomkhiqizo. Ipulatifomu ingabuye ibhanqwe nemicimbi engaphakathi komuntu ukukhulisa ukufinyelela komhlaba.
Lesi yisizukulwane esilandelayo sokuhlangenwe nakho komkhiqizo okunengqondo; indinganiso entsha ngaphandle kwemingcele. Ubuchwepheshe buyintuthuko ebesinayo emisebenzini ngaphambi kwezinguquko zomhlaba ebezingalindelekile nezidingekayo kokuhlangenwe nakho kwedijithali nokubonakalayo. Kusebenza ngokukhethekile manje, futhi sikholwa ukuthi kuyashintsha ukuthi ama-brand achuma kanjani futhi ahlangana kanjani ngoba iwavumela ukuthi anikele ngokwengeziwe - ubuciko obuningi, ubusha obengeziwe, ulwazi oluthe xaxa. Kwakha amaphuzu amaningi wokuthinta ashukumisayo ukuletha abalandeli abakhona nabangahle babe khona kulo mkhiqizo emicimbini ebonakalayo, izingqungquthela, ukwenza kusebenze nemibukiso.
USteve Alexander, umsunguli kanye noChief Experience Officer weMVRK
Unentshisekelo yokubona ukuthi isipiliyoni seVx360 sinjani?
Tags: umcimbimvvumcimbi ongokoqobovx360
Izici ezi-8 zoMkhiqizo Omuhle ka- “V”